Nylon erevheta pulley yakashandiswa mumidziyo yekusimudza kwemakumi emakore kukodzera kwayo kwekuzvigadzira mafuta, kurerutsa uremu uye kudzivirirwa kwetambo yetambo. Anopfuura makumi masere muzana ematanho erevheta anoshandisa zvinhu zvenylon uye anogona kuwana hupenyu hwakawanda hwebasa remidziyo yese Uye sekutonga kwakaomarara kwehurumende pane indasitiri yesimbi yekusvibisa nharaunda, nylon pulleys inoshandiswa zvakanyanya muzvigadziriso zvemagetsi.
MC nylon bhandi pulley yakaiswa mumuchina indasitiri kwemakumi emakore kweasingaenzanisirwe mabhenefiti eruzha ruzha, wedzera hupenyu hwehupenyu hwetambo tambo, kuzvidzora-lubrication uye zvichingodaro.
Iyo nylon pulleys yatinogadzira ine huremu huremu uye nyore kuisa panzvimbo yakakwirira. Nylon crane pulleys ave achishandiswa zvakanyanya muzvinhu zvakasiyana siyana zvekusimudza, zvishoma nezvishoma achitsiva ekare masimbi pulleys nezvakanaka zvawo.
Nylon rollers anoshandiswawo zvakanyanya. Pulleys anoshandiswa chero paine tambo dzesimbi. Iwo akajairwa pulleys akagadzirwa nesimbi yakakandwa, simbi yakakandwa nezvimwe zvinhu. Metal pulleys inopedza tambo, ichikanganisa zvakanyanya hupenyu hwetambo inodhura uye ichityisidzira kushandiswa kwakachengeteka kwemidziyo. Iko kushandiswa kwesimbi yenyuchi zvinhu kugadzira pulleys ndizvo chaizvo kugadzirisa zvakakomba zvipingaidzo zvesimbi pulleys uye kugadzirwa uye kuiswa
Nylon nhungamiro inoiswa muEuropean gourd, inova chikamu checrane, uye Nylon guider yakaiswa pane reel kune yayo yakakodzera kune inoshandira nharaunda, uye inogona kudzivirira tambo tambo kubva kune yakanyanyisa kupfeka, kuwedzera hupenyu hwebasa, kudzikisira kupokana pakati petambo tambo uye simbi zvikamu. Anenge makumi mapfumbamwe muzana muzana yeEuropean gourd ikozvino inochinjisa Nylon guider kune ayo asingadzoreke kubatsira
Zvibatanidzwa zveNylon zvinoshandiswa kubatanidza miseve miviri (yekutyaira shaft uye inotyairwa shaft) munzira dzakasiyana kuti vakwanise kutenderera pamwechete kuendesa zvadzimira zvemagetsi zvikamu. Mune iyo yekumhanyisa-kumhanya uye inorema-mutoro kutapurirana kwesimba, kumwe kubatanidza kune zvakare basa rekupomhodza, kunyorova uye nekuvandudza mashandiro anoita esimbi.
Nylon inotsvedza inoiswa zvakanyanya mutiraki crane, Uye inogona kugadzirwa muhukuru hwakasiyana, zvimiro, kubata akasiyana marori crane zvinodiwa.
kupisa kupisa Nylon pulley vhiri
Nylon pulleys ave achishandiswa zvakanyanya muzvinhu zvakasiyana-siyana zvekusimudza sezvikamu zvemakona eshongwe, zvishoma nezvishoma achitsiva ekare masimbi epuru nezvakanaka zvadzo. Nylon pulleys inogona kutamba chinzvimbo chekuzvidzora pachayo kuitira kutsiva simbi nepurasitiki
Nylon cliver pulley nemutengo wakanakisa
Zvinhu zvenaironi cliver chisimudziso yakanyatsoiswa saizi yekushandisa mumuchina we winch. Winch, ine dhiramu inotenderera tambo yesimbi tambo kana cheni kusimudza kana kudhonza inorema diki uye yakapfava yekusimudza michina, inozivikanwa se winches
Nylon washers ine yakanakisa kuputira zvivakwa, isiri-magineti, kupisa kupisa, huremu hwakareruka, mapurasitiki ewasher ezvimwe zvinhu zvine zvakare kupisa kwakawanda, simba rakakura, ngura kuramba, zvimwe zvigadzirwa zvine anti-kudonha basa, rinoshandiswa zvakanyanya munzvimbo dzakasiyana dzeindasitiri.
Iyo yekugadzira nzvimbo yeiyo nylon pini iri mubhushi. Nylon pini dzinonyanya kushandiswa mukugadzirisa kweanoumbwa anoumba. Inofananidzwa nemapini esimbi, pini dzenylon dzinokuvara zviri nyore, izvo zvinova nechokwadi chekuti mafuru akaomarara haana kukuvara. Naizvozvo, zvinofungidzirwa kuti kushandiswa kweiyi nylon pini kuchaderedza zvakanyanya chiyero chechimedu chevhu.